HTC wepụtara ekwentị 5G mbụ ya na 2020 | Gam akporosis
Yves Maitre, onye isi oche ọhụrụ nke HTC, na-akwado mmepe ọhụụ na mpaghara na ohere dị iche iche na Taiwan, ihe niile gbasara 5G na eziokwu dị adị. Companylọ ọrụ ahụ kwadoro nke ahụ ga-ebido ekwentị 5G mbụ na 2020Ya mere, ọ ga-asọmpi ọzọ ụdị ndị ọzọ dị na ahịa.
HTC doro anya na ọ ga-elekwasị anya na ọdịnaya anya kwadoro site na njikọta nke ise, ihe niile HTC Ọpụpụ 1S igba egbe. Nkọwa niile gbasara ngwaọrụ amaghi, mana n'agbanyeghị nke a, akụkọ a na-adị mma ịhụ arụmọrụ nke ndị ama ama Taiwanese.
Lọ ọrụ ahụ ga-arụ ọrụ nke ọma na Qualcomm, ọ ga-eme ya iji wepụta ekwentị kachasị elu na Snapdragon 865 bụ otu n'ime ibe nke njedebe mbụ a nwere ike ịbata. O doro anya ma ọ bụrụ na ọ ga-ebuputa ekwentị dị n'etiti n'etiti usoro dị elu.
HTC taa ọ na-enye ngwaike na ngwanrọ iji nye ahụmịhe na adịwanyewanye adị n'ezie, ihe ndị na-ewu ewu na ewu ewu. Ha na-ata ahụhụ site na enweghị ngwa, yabụ ụlọ ọrụ chọrọ igosipụta ụfọdụ ọganihu na ọnwa ndị na-abịanụ na mmemme.
na ọhụrụ HTC Cosmos J.Randall, HTC VIVE Cosmos Play, HTC VIVE Cosmos XR na VIVE Sync ga-amalite n'oge na-adịghị anya, n'ihi ya, a ga-ewepụta ha n'ọnwa Machị na San Francisco, USA. Igwe iko ahụ na-ekwe nkwa ịmekọrịta site na telivishọn na ọbụna site na smartphones iji ruo ọha na eze.
Ihe omume Onye Mmepụta nke Onye Mmepụta 2020 ga-abụ nke gosipụtara ngwaọrụ ma ọ bụ ma eleghị anya abụọ, mana maka nke ahụ, a ka nwere ọtụtụ izu maka HTC iji ju ndị na-egwu ya anya, mgbe ọ lara ezumike nká maka oge site na imepụta smartphones.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Egwuregwu gam akporo » HTC ga-ebido ekwentị 5G mbụ ya na 2020
Nwere ike ibudata Dragọn Quest nke Kpakpando iji dịrị njikere maka echi
Oge na-abịa dị ka nnukwu ihe ọzọ na WhatsApp, ịbụ onye nchekwa 100%